Itoobiya Oo Qorsheyneysa Dhismaha Ciidamadeeda Badda. | Awdalmedia.com
Itoobiya Oo Qorsheyneysa Dhismaha Ciidamadeeda Badda.
Sun 03 June 2018.
Dowladda itoobiya ayaa qorsheyneysa dhismaha Ciidamadeeda Badda ah, kaddib markii ay dhameystirtay Ciidamadeeda cirka iyo dhulka.
Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed ayaa hadalkan ka sheegay kulan uu la qaatay Madaxda Ciidamada Difaaca Qaranka
“Kaddib dadaaladii la sameeyay oo aan ku dhisnay awoodda difaaca qarankeeda, waxaa dhisnay mid ka mid ah ciidanka ugu xooggan dhulka iyo cirka ee Afrika, waa inaan dhisnaa ciidamadeena badda mustaqbalka”ayuu yiri Mr Abiy Ahmed.
Itoobiya ayaa xilligan leh machad lagu barto Badaha oo ku yaalla Harada Tana, waxaa uu sanadkiiba soo saaraa illaa 500 oo isugu jira Engineero Badda, farsama yaqaano iyo saraakiil, waxaana la qorsheynayaa in la kordhiyo, lana gaarsiiyo sanadkiiba 1,000 sarkaal.
Ra’iisul Wasaaraha cusub ee Itoobiya Abiy Ahmed ayaa bishii May dowladda Sudan la soo gaaray heshiis lagu hormarinayo Dekeda Port Sudan ee badda Cas, sidoo kale waxay Jabuuti ku heshiiyeen inay is weydaarsadaan dekedaha, duulimaadyada, iyo isgaarsiinta.
Itoobiya oo aan Bad laheyn waxay xiliggan isticmaashaa Dekedaha Berbera iyo Jabuuti oo ay alaabaha kala soo degtaa.
Horaantii sanadkan Itoobiya ayaa qeyb ka noqotay heshiis saddex geesood ah oo lagu qeybsaday saamiga Dekeda Berbera ee Somaliland.